ဥရုဂွေးတောင်အမေရိက၏အရှေ့တောင်ဘက်ဒေသတွင်တည်ရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဒါဟာတောင်ဘက်ဖို့ Rio de la Plata (ငွေ၏မြစ်) နှင့်အတူအရှေ့တောင်ရန်၎င်း၏အနောက်ဘက်မှအာဂျင်တီးနား၎င်း၏မြောက်ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက်မှဘရာဇီးနယ်စပ်နှင့်အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာ။ ဒါဟာတရားဝင် "ဥရုဂွေး၏အရှေ့တိုင်းသမ္မတနိုင်ငံ" ဟုခေါ်သည်။ ဥရုဂွေးက၎င်း၏ပါလီမန်အဆောက်အနှင့်အကြီးဆုံးမြို့မှာမြို့, မွန်တီဗီဒီယို၏မြို့ပြဧရိယာထဲမှာဘယ်မှာ 3.4 သန်းတိုက်ရိုက်ခန့်မှန်းခြေ 1.7 လူဦးရေသန်းရှိပါတယ်။ ၎င်း၏မြေဧရိယာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 68,000 စတုရန်းမိုင် (176,000 စတုရန်းကီလိုမီတာ) ဖြစ်ပါသည်။ ပထဝီအနေအထားအရ, ဥရုဂွေးတောင်အမေရိကအတွက်ဒုတိယအသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
1991 ကတည်းကဥရုဂွေးနိုင်ငံတကာအစီရင်ခံစံချိန်စံညွှန်း (IFRS) အောက်ပါစတင်ခဲ့သည်။ နောက်ထပ်ကဤလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့, ဥရုဂွေး 2001 အတွက်ဘဏ္ဍာရေးရှင်းတမ်းများ Registry ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ ထို့နောက်မဖြစ်မနေ IRFS application ကိုစံချိန်စံညွှန်းများ 2004 အတွက်အဆင်ပြေအောင်ခဲ့ကြသည်။
• ကမ္ဘာတစ်ဝန်းဝင်ငွေခွန်ပေါ်မှာအဘယ်သူမျှမအခွန်: နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေမအခွန်အခများနှင့်ခွဲဝေဖြန့်ဖြူးမအခွန်အခများရှိပါတယ်။ တစ်ခုတည်းသောအခွန်အခများသည်၎င်း၏နယ်စပ်အတွင်းပိုင်းရရှိခဲ့ပြီးအကျိုးအမြတ်အပေါ်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအခွန်နိုင်ငံများတွင်နေထိုင်သူများကသူတို့အခွန်အာဏာပိုင်များအားလုံးကိုဝင်ငွေအစီရင်ခံရန်လိုအပ်သည်။
• နှစ်ဦးကရှယ်ယာရှင်များမှာ: တစ်ဦးတည်းသာဒါရိုက်တာနှစ်ယောက်ရှယ်ယာရှင်များဥရုဂွေးအတွက်ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းဘို့လိုအပ်သည်။ တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရှိနိုင်ပါသည်ဒါရိုက်တာများသို့မဟုတ်ရှယ်ယာရှင်များ၏နံပါတ်မန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်။ ဒါရိုက်တာများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များဥရုဂွေး၏နေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
• အဘယ်သူမျှမနိမ့်ဆုံး Capital ကို Value ကို: ဥရုဂွေးအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမနိမ့်ဆုံးမြို့တော်တန်ဖိုးကိုလိုအပ်ချက်ရှိပါသည်။
• အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ယူရို: အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်ဒေါ်လာနှင့်ယူရိုနှစ်ဦးစလုံးတွင်ကျယ်ကျယ်ဥရုဂွေးအတွက်လက်ခံခဲ့သည်နေကြသည်။
• နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု: ဥရုဂွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နိုင်ငံရေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာတည်ငြိမ်မှု, လက်တင်အမေရိကန်အတွက်အကောင်းဆုံးစာတတ်မြောက်ရေးနှုန်းမှာရှိပါတယ်, နှင့်၎င်း၏စီးပွားရေးကိုပိုပြီးပွင့်လင်းခြင်းနှင့်လစ်ဘရယ်ဖြစ်လာနေသည်။
• မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ: ဥရုဂွေးမဟာဗျူဟာကဒီစျေးကွက်အတွက်အားသာချက်တစ်ခုပေးခြင်း, တောင်အမေရိကတွင်တည်ရှိသည်။
• မြို့တော်အမြတ်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: ဥရုဂွေး Non-နေထိုင်သူများ၏ဘဏ္ဍာရေးပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက်မြို့တော်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်။
• ကန့်သတ်တာဝန်ဝတ္တရား: ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်းအတွက်ရှယ်ယာရှင်ရဲ့တာဝန်ယူမှုကိုယေဘုယျအားဖြင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ paid-up, မြို့တော်မှကန့်သတ်ထားသည်။
• ဆောင်လုလင်အစုရှယ်ယာ: ဥရုဂွေးအတွက် corporate ရှယ်ယာဆောင်လုလင်သို့မဟုတ်အမည်ခံခဲ့ကြသည်။ ယခုမူကားဆန့်ကျင်ငွေကြေးခဝါချမှုလေထုနှင့်အတူ, တအကျိုးရှိသောများ၏အမည်များမှတ်ပုံတင်ရန်ရမယ် ပိုင်ရှင်တွေ.
• မြင့်မားသောဝင်ငွေခွန်ပြည်သူ့အင်အား: ဥရုဂွေးလက်တင်အမေရိကရှိအမြင့်ဆုံးဝင်ငွေဖြန့်ဖြူးပိုင်ဆိုင်သည်။
ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်းပြီးသားကော်ပိုရေးရှင်းအမည်များကိုရှိရင်းစွဲဆင်တူမဟုတ်ကြောင်းထူးခြားတဲ့အမည်အားရွေးချယ်ရမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနာမသုံးဗားရှင်းသူတို့ထဲကတစ်ဦးဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့တင်သွင်းနေကြသည် အတည်ပြု.
ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်းကအနည်းဆုံးနှစ်ခုရှယ်ယာရှင်များရှိရမည်။ တစ်ဦးကော်ပိုရေးရှင်းရှိနိုင်ပါသည်ရှယ်ယာရှင်များအဘယ်သူမျှမအများဆုံးအရေအတွက်ကရှိပါသည်။ ရှယ်ယာရှင်များဥရုဂွေး၏နေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်းအနည်းဆုံးဒါရိုက်တာရှိရမည်။ ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်ဒါရိုက်တာများမရှိအများဆုံးအရေအတွက်ကရှိပါသည်။ ဒါရိုက်တာဥရုဂွေး၏နေထိုင်သူများဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
ဝင်ငွေခွန်: အခွန်ကောက်မည်တစ်ခုတည်းသောဝင်ငွေဥရုဂွေးအတွက်ရရှိခဲ့ပြီးဝင်ငွေဖြစ်ပါသည်။ ကမ်းလွန်ဝင်ငွေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဥရုဂွေးအတွက်အခွန်ကောက်ကြသည်မဟုတ်။
ကော်ပိုရိတ်ဝင်ငွေအခွန် IRAE (ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လှုပ်ရှားမှုများ) - ဝင်ငွေဥရုဂွေးအတွက်တထစ်ချလျှင်ဒီအခွန်နှုန်းကိုသက်ဆိုင်ပါသည်။ သောအမှုဖြစ်လျှင်, ထို့နောက် 25% ၏ပြားချပ်ချပ်အခွန်နှုန်းကိုပိုက်ကွန်ဝင်ငွေ (အမြတ်အစွန်း) အားလျှောက်ထားသည်။
ဖက်ဒရယ်ပိုင်ဆိုင်မှု၏အခွန် - တစ်ဦးချင်းစီဘဏ္ဍာရေးနှစ်၏အဆုံးမှာ 1.5% ၏ပိုက်ကွန်တန်ဖိုးရှိပြားအခွန်ဥရုဂွေးကနေဖုံးလွှမ်းနေတာကိုအားလုံးအသားတင်ရကျိုးနပ်ဖို့လျှောက်ထားသည်။ သို့သော်ဥရုဂွေးရဲ့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပြင်ပတွင်ထားရှိဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအခွန်ကောက်မည်မဟုတ်ပါ။
ICOSA (Corporate ထိန်းချုပ်ရေးအခွန်) - ဤအသီးအသီးဘဏ္ဍာရေးနှစ်ရဲ့အဆုံးမှာလျှောက်ထားကြောင်း $ 520 အမေရိကန်ဒေါ်လာမှာခန့်မှန်းထားတဲ့နှစ်ပတ်လည်ပြားနှုန်းကိုအခွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ်းလွန်ကော်ပိုရေးရှင်းသို့သော်ဒီအခွန်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
VAT (Value ကို Added အခွန်) - အဆိုပါ VAT ကိုအခွန်နှုန်းကိုဥရုဂွေးအတွက် 22% ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အခွန်သာလျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ် သို့ အ သှေးလှညျ့ခွငျး of ကုန်ပစ္စည်းများ or န်ဆောင်မှု in ဥရုဂွေး.
နှစ်ချက်အခွန်ကောက်ခံမှု: ဥရုဂွေးအချို့အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူအာဂျင်တီးနား, အီကွေဒေါ, ဖင်လန်, ဂျာမနီ, ဟန်ဂေရီ, မော်လ်တာ, မက္ကဆီကို, အိန္ဒိယ, ပေါ်တူဂီ, စပိန်နှင့်တောင်ကိုရီးယားနှင့်စာချုပ်များနှင့်အတူနှစ်ဆအခွန်ကောက်ခံမှုမှကာကွယ်ရန်ယေဘုယျစာချုပ်များလက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးစေ့စပ်ညှိနှိုင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်၌ရှိကြ၏။
ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်း UYU 12,000 ၏နှစ်ပတ်လည်သက်တမ်းတိုးကြေးပေးဆောင်ဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။
ဥရုဂွေးအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းမေတ္တာရပ်ခံလျှင်တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ဖော်နိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏နေ့စဉ်အရောင်းအများ၏မှတ်တမ်းများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အဆိုပါမှတ်တမ်းများကွန်ပျူတာစာရွက်များကို အသုံးပြု. ပြီးစီးနိုင်ပါတယ်နှင့်လည်းပိတ်ပွဲချိန်ခွင်လျှာစာရွက်ကနေ 180 ရက်အတွင်းစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မည်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုရမည်ဖြစ်သည်။ ကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းများအသုံးမနေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက်စာအုပ်တွေစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအမျိုးသားမှတ်ပုံတင်မည်အားဖြင့်အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အားလုံးစာရင်းကိုင်မှတ်တမ်းများနိုင်ငံခြားငွေကြေး၎င်းတို့၏မှတ်တမ်းများကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများသည်၏ချွင်းချက်နှင့်အတူဒေသခံငွေကြေးစနစ်အတွင်းထိန်းသိမ်းထားခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မှတ်တမ်းများဒါရိုက်တာများ '' အစည်းအဝေးများ၏ရှယ်ယာရှင်နဲ့ဘုတ်အဖွဲ့နှစ်ဦးစလုံးထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါတယ်။
ထို့အပြင်တစ်ဦးစာရင်းစစ်ဖွင့်စျေးကွက်အပေါ်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်၎င်းတို့၏ရှယ်ယာများကိုရှိသည်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုလိုတာကဘဏ်များသာ "ပွင့်လင်း" ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်မသင်မနေရဖြစ်ပါတယ်။ "ပိတ်ထားသော" ပုဂ္ဂလိကကော်ပိုရေးရှင်း၎င်းတို့၏ဟန်ချက်စာရွက်များစာရင်းစစ်ဆေးခဲ့ကြရပေမည်။
ဥရုဂွေးကော်ပိုရေးရှင်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. ကိုးဦးရက်သတ္တပတ်ယူမျှော်လင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်ပြီးစီးအချိန်ကော်ပိုရေးရှင်းက၎င်း၏မှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းများပြီးဆုံးဘယ်လိုတိကျစွာ, အကော်ပိုရိတ် name ကိုမှတ်ပုံတင်နှင့်အတူ turnaround ပေါ်တွင်မူတည်သည်အဖြစ်။
ဥရုဂွေးအပါအဝင်ယင်း၏ကော်ပိုရေးရှင်းများအတွက်အများအပြားအကျိုးခံစားခွင့်ကမ်းလှမ်း: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေမရှိအခွန်, နှစ်ခုသာထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ရှယ်ယာရှင်များမရှိနိမ့်ဆုံးမြို့တော်တန်ဖိုးသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ယူရိုအလွယ်တကူလက်ခံခဲ့ကြသည်, ထိုတောင်အမေရိကစျေးကွက်အတွက်မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာအတွက်နိုင်ငံရေးနှင့်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှု, ကန့်သတ် ရှယ်ယာရှင်များအဘို့အတာဝန်ယူမှုများနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ '' privacy ကိုအဘို့အဆောင်လုလင်၏ရှယ်ယာထုတ်ပေးရန် option